टिप्स – Jaljala Online
पिसाब किन पोल्छ, येस्तो अचम्म हुदोरहछ, जानी राखौ
काठमाडौँ । कम पानी पिउने हुँदा पिसाब पोल्ने समस्याले धेरैलाई सताइरहेको हुन्छ। अझ यो समस्या जोडोमा भन्दा पनि गर्मीको समयमा धेरै देखा पर्ने गर्दछ। कम पानी पिए पनि लामो समयसम्म पिसाब रोक्नाले समेत पिसाब पाल्ने समस्या देखिने चिकित्सकहरुले बताउने गरेका छन्। त्यसकारण चिकित्सकहरुले कारण जुनसुकै भएता पनि लामो समयसम्म पिसाब रोक्ने काम कहिल्यै पनि गर्न […]
भोली मिति २०७६ साल फागुन महिनाको २२ गते बिहिवार रहेको छ । अंग्रेजी पात्रोअनुसार २०२० मार्च ५ तारिख रहेो छ । मेष -सिद्धान्तमा मतभेद देखिनाले कामबाट सोचेको नतिजा तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ। साथीभाइसँग असमझदारी बढ्ने देखिन्छ। काममा अरूको भर नपर्नुहोला। प्रयत्न गर्दा पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले आंशिक काम बन्नेछ। रोकिएका […]
तपाईंलाई थकाइ धेरै लाग्छ ? त्यसोभए तत्काल यो पढ्नुस
संसारभरीमै सबभन्दा बढी मानिसको मृत्यु मुटुरोगले हुनेगर्छ । मुटुरोग प्राणघातक रोग हो, तर समयमै उचित उपचार नहुनु यसको जटिलताको प्रमुखकारण मानिन्छ । जनचेतनाको कमिले मुटुरोगको समयमै पहिचान नभएर लाखौ मानिस असामयिक मृत्युको शिकार हुनपुग्छन् । अधिकांश मुटुरोग र यसका लक्षणहरु सामान्य व्यक्तिले पनि पत्ता लगाउन सक्छन् । मुटुरोग विशेषज्ञहरुले पनि यिनै लक्षणहरुको आधारमा मुटुरोग भए […]
काठमाडौँ | विदेशवाट फर्केका यात्रुले आफू साथै वा आफू आउनु भन्दा अघि वा पछि आफूले प्रयोग गरेका वा निजी प्रयोजनको लागि ल्याउने सामानका सम्वन्धमा समय/समयमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयवाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त सूचनामा के कति अवधि विदेश वसेका मानिसहरुले के कति परिमाणमा के के सामान ल्याउन पाउने हो, उक्त मालवस्तुहरुमा के कति प्रतिशत […]
Posted on December 12, 2019 December 13, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
यस्तो अवस्था भएका व्यक्तिले भुलेर पनि खानुहुँदैन दही नत्र भने विष समान बन्न सक्छ। तर यसमा अन्य फाइदाहरु पनि हामीले यहाँ व्याख्या गरेका छौँ। जानौँ दही स्वादिलो पेय हो र गुणकारी पनि। दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ। गर्मीमा दहीले तिर्खा पनि मेट्छ। तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ। दही स्वास्थ्यको […]
कलेजोमा समस्या देखिएको कसरी थाहा पाउने ? जान्नुहोस (भिडियोसहित)
डा. राहुल पाठक कलेजो रोग विशेषज्ञ कलेजोको समस्याहरू धेरै छन्। कलेजो बिग्रनुका कारणहरू पनि धेरै छन्। सामान्यत: हाम्रो खानपानको शैलीले गर्दा कलेजो बढी बिग्रिन्छ। रक्सीको प्रयोग,भाइरल इन्फेक्सन,हेपटाइटिस बी र हेपटाइटिस सीले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा कलेजोको समस्या देखिन्छ। खानपानले गर्दा नै हेपटाइटिस ए र इका समस्याहरू देखिन्छ। तर यी समस्या छोटो समयका लागि हो। कलेजोलाई आराम […]
Posted on November 16, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
Posted on November 4, 2019 November 4, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
यस्तो छ श्रृंखला खतिवडाको पहिलो महिनावारी अनुभव [भिडियोसहित]
कात्तिक ५, काठमाडौं । महिनावारीका कुरा केही साताअघि पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडिओ सार्वजनिक गरिन्। यो खबर अनुषा अधिकारीले सेतोपाटीमा लेखेकी छन । ‘छाउपडीको अनुभव’ नामक उक्त भिडिओमा उनले अछाममा रहेको छाउप्रथाको अवस्था प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यहाँका महिलाले महिनावारी बेला भोग्नुपर्ने समस्या चित्रण गर्दै श्रृंखला स्वयं छाउभित्र बसेको देखिन्छ भिडिओमा। […]
Posted on October 22, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
दशैं/तिहारमा घर फर्कदै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुस् भन्सार नतिरी कुन-कुन सामान ल्याउन पाइन्छ
काठमाडौं। दसैँ/तिहार मनाउन विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? घर फर्किँदा के–के समान लैजान पाइने र नपाइने हो भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ भने सरकारले विदेशमा काम गरेर फर्किनेहरुका लागि विभिन्न वस्तुमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय समान ल्याउनै पाइँदैन भने केही समान भन्सार नतिरी ल्याउन पाइन्छ । कतिपय सामानको भन्सार तिर्नुपर्छ । त्यसैले एयरपोर्टमा आएर […]
Posted on September 27, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)